स्प’ष्टिकरणको पत्र घरमै पुगेपछि नेताहरुको भागाभाग ! – Yuwa Aawaj
चैत्र १०, २०७७ मंगलबार 516
काठमाडौं : नेकपा एमालेले पार्टीहित र अनुशासन विपरित काम गर्ने चार नेतासँग स्प’ष्टिकरण पत्र पठाएको छ । बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार नेतालाई आज स्प\_ष्टिकरण पत्र बुझाएको हो ।
पार्टी के’न्द्रीय कार्यालयबाट गएका कर्मचारीले खामबन्दी स्प’ष्टिकरणपत्र बुझाएका हुन् । नेपाल र सुरेन्द्र पाण्डेका स्वकीय सचिवले पत्र बुझेका छन् भने भिम रावल र धनश्याम भुषाल भने सम्पर्क वि’हिन भएका छन् ।
रावलले स्प’ष्टिकरणपत्र बुझ्न अश्वी’कार गर्दै पत्र लिएर गएका कर्मचारीलाई घर भित्रै छिर्न दिएनन् । घर भित्र छि’र्न नपाएपछि ति कर्मचारीले रावल बस्ने टोखास्थित कोलोनीको सी १४ नम्बर घरको लेटर बक्समा पत्र छिराएर फ’र्किएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
घनश्याम भुसालको भने मोबाइल स्वीच अफ रहेकाले पत्र बुझाउन बाँकी रहेको छ । महासचिव ईश्वर पोखरेलको हस्ताक्षरसहित पठाइएको स्प’ष्टिकरणपत्रमा अभियोगमाथि चित्त बुझ्दो जवाफ तीन दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ ।
चित्त बुझ्ने जवाफ नआएमा कार’वाही किन नगर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख रहेको एमाले स्रोतले जा’नकारी दिएको छ । उता एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पार्टी नेताहरुलाई स्प’ष्टीकरण सोध्ने पक्ष नै लाखौं पश्नको घेरामा रहेको बताएका छन्।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृ’त्वमा शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्प’ष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो।
सोहिअनुसार ती चार नेतालाई आज सोमबार स्प’ष्टीकरण पत्र पठाइएको छ। नेताहरुलाई स्प’ष्टीकरण सोध्ने प्रसंग तातिरहेका बेला नेता भट्टराईले ‘सोध्नेहरु स्वयं लाखौं प्रश्नको घेरामा छन्’ भनी आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालमार्फत् व्यक्त गरेका हुन्। त्यस्तै नेता भीम रावलले भने आफू समक्ष स्प’ष्टीकरण पत्र आइनपुगेको बताए । ‘खै कसलाई थमाए मलाई त थाहा भएन, मकहाँ आइपुगेको छैन’, रावलको भनाइ छ ।
Prevयी पाँच भारतीय, जो इलामका दुर्गाप्रसादका लागि लडे !
Nextबंगलादेशले बर्खामा २ सय मेगावाट विद्युत किन्न माग्यो !